शनिदेवलाई खुसी पार्न के के नखाने ? – Khabar Silo
शनिवार पात्रो अनुसार हप्ताको सातौं दिन पर्छ । यसको नामाकरण शनिग्रहको रूप मानिने शनि देवताको नामबाट गरिएको हो । हिन्दु धर्मको किवदंती अनुसार शनिबारकी माता कालीमाता हुन् । अझ शनिदेवलाई न्यायको देवता मानिन्छ ।
धर्मशास्त्र अनुसार, यदि कुनै व्यक्तिको कुण्डलीमा शनिदोष छ भने त्यस्ता व्यक्तिले शनिबारको दिन भोजन गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । के छ त शनिवारको विशेषता ?
साँझमा बत्ती नबालेको घरमा लक्ष्मीले बास गर्दिनन् भन्ने धार्मिक मान्यता रहिआएको छ । महालक्ष्मीको पूजा र आराधना गर्नाले धन र समृद्धि प्राप्त हुने विश्वास समेत रहेको छ । घरमा सुख संम्पन्नता र सधै माता महालक्ष्मीको बास होस् भन्ने मनोकांक्षा सबैको रहेको हुन्छ । हिन्दु धर्मअनुसार यदि तपाई देवी लक्ष्मीलाई खुशी राख्न र उनलाई आफ्नो घरमा […]
वैवाहिक समारोहमा वेडिङ फोटोग्राफरबाट समारोह झल्काउने, मानिसका हाउभाउ र विवाहित जोडीका रमाइला पलहरुका फोटोको अपेक्षा गरिन्छ । तर एक बदमास फोटोग्राफरले जसले झन्डै सय ओटा भड्किला तस्बिर खिचेकै कारण कानुनी उल्झनमा फस्नु परेको छ । बेलायतको बोलिङटनका स्टेफ र पउल अनविनको विवाहमा फोटो खिच्न आएका वेडिङ फोटोग्राफर डेबिड किलकोर्सले ९६ ओटा तस्बिरमा विवाहमा आएका महिलाका […]